“Tournoi d’échecs Random Fischer”: norombahin’i Magnus Carslen ny fandresena - ewa.mg
“Tournoi d’échecs Random Fischer”: norombahin’i Magnus Carslen ny fandresena
News - “Tournoi d’échecs Random Fischer”: norombahin’i Magnus Carslen ny fandresena
Nizotra tsara araka ny tokony ho
izy ilay lalao “Random Fischer”, natao ny faran’ny herinandro teo.
Raha ny valin-dalao, ilay tompondaka eran-tany sady mpilalao
mendrika maneran-tany, i Magnus Carslen, ny nahazo ny fandresena,
taorian’ny “round” 9. Efa nisy fotoana anefa nihoaran’ireo mpilalao
sasany, toa an’i Aronian Levon, ity tompondaka eran-tany ity, izay
nahazo isa 6.
Tsiahivina fa ny maitre
Rakotomaharo Fy no nanao ny “live” sy nitantara ity lalao
nandraisan’ny kalaza maro maneran-tany anjara ity. Nandritra izany,
miezaka manazava ny lalaon-tsaina “échecs 960”, nolalaovina
tamin’io fotoana io, i Fy sady mamaly ny fanontanian’ireo mpanaraka
ny “live”. Nambaran’i Fy fa samy hafa ny “échecs 960” sy ny “échecs
classiques”. Amin’ny “échecs 960”, tsy ilaina ny manao fiomanana be
fa ny fahaizana mikaroka ny tena ilaina. Misy tombony ara-tsaina,
araka izany, ity karazany iray ity, raha hoarina amin’ny “échecs”
tsotra, mila famerenana sy fanomanana be.
L’article “Tournoi d’échecs Random Fischer”: norombahin’i Magnus Carslen ny fandresena a été récupéré chez Newsmada.
Miisa 2 tapitrisa ny taratasy fanamarinana fananan-tany hozaraina hatramin’ny taona 2022. Manohana ity fandaharanasa ity ny Banky iraisam-pirenena, nampitombo avo roa heny ny famatsiam-bola ho an’ny fambolena sy ny fiompiana, ary hiarovana ny fananan-tany (Casef).Hatao atsy ho atsy ny sonia ny fifanarahana famatsiam-bola hanamboarana ny lalana RN-5A, mampitohy an’Ambilobe sy i Vohemar. Tsiahivina fa efa natomboka ny taona 2018 ity asa ity ary nohavaozina ny taona 2019. Mamatsy vola azy ny governemanta sinoa amin’ny alalan’ny banky Exim Bank, mitentina 150 tapitrisa dolara. Tsy maintsy ampiasaina amin’ny fanamboarana fotodrafitrasa (tohodrano, sekoly, lalana, fitaovam-pambolena sy fiompiana, sns) ny fanampiana avy any ivelany. Nanamarika mantsy ny filoha Rajoelina fa saika mifototra amin’ny andrimpanjakana, toy ny fampiofanana, ny fanomezana ordinatera sy fiara ho an’ny fitantanana ny fanampiana nefa tsy misy vokatra mivantana amin’ny fiainam-bahoaka. Notendrena ny lehiben’ny vaomieram-paritry ny tolotrasam-panjakana any amin’ny faritra miisa 16. Voatendry koa ny filohan’ny filankevi-pitantanan’ny Antokon-draharaha misahana ny famatsian-drano any atsimo (AES), i Fiandraza. Lasa tale misahana ny mpiasa ao amin’ny minisiteran’ny Fitaterana sy ny fizahantany koa Rtoa Rakotoarisoa Volanirina ary sekretera jeneraly Rakotovahiny Liva Jean Luc.L’article Vaovao tambatra a été récupéré chez Newsmada.
Cnaps-Dinec: fiofanana fiahiana sosialy tany Antsiranana
Nanome fiofanana ho an’ny Vondron’ny ray aman-drenin’ny mpianatra (Vram) ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (Cnaps) tany amin’ny diosezin’Antsiranana. Nitarika ny fotoana Rtoa Riziky Abdou, nisolo tena ny tale jeneraly vonjimaika ny Cnaps, Rtoa Tsaboto Joslina. Noresahina ny hanamorana ny hahazoana fiahiana sosialy, ny handresen’ny mpiofana lahatra ny manodidina azy, ny lanjan’ny tombontsoa omen’ny Cnaps. Nampahafantarina ny tolotry omena ny mpikambana, toy ny fiahiana ny fianakaviana, ny solon-takaitra raha sendra tra-doza na ny aretina vokatry ny asa, ny fisotroan-dronono, sns.Nanomboka ny taona 2016 ny fiaraha-miasan’ny Cnaps sy ny Foibe nasionalin’ny sekoly katolika Didec, nahatanterahana ny fiofanana amin’ny fiahiana sosialy, toy izao. Nilaza ny tompon’andraikitry ny fiofanana sady mpandrindra ny asa an-tsekoly (Didec), Rabenandrasana Alfred, fa “tanjona ny fahalalana ny lalàna sy ny mpahafantatra izany amin’ny hafa”.Niofana koa ny ray aman-drenyHo an’ny talen-tsekoly, ny mpampianatra, ny mpitantana eny amin’ny sekoly katolika ny tapany voalohan’ny fiofanana. Nomena fiofanana koa ny ray aman-drenin’ny mpianatra any amin’ny diosezy, ho an’ny tapany faharoa. Vonona ny handresy lahatra ny namany hiditra Cnaps i Mananstoa Monios Flidos, ray aman-drenin’ny mpianatra ao amin’ny sekoly Fo Masin’i Jesoa Antsiranana.Nanamarika ny mompera Thierry Landry, mpanampy ao amin’ny fitantanana ny Dinec Antsiranana, fa efa mpikambana Cnaps avokoa ny mpampianatra ao amin’ny diosezy afa-tsy ny any ambanivohitra, izay miisa vitsivitsy sisa, satria misolo mpampianatra matetika.Njaka A.L’article Cnaps-Dinec: fiofanana fiahiana sosialy tany Antsiranana a été récupéré chez Newsmada.
EDGARD RAZAFINDRAVAHY :: «Fahasahiana ny fanaovan’i Andry Rajoelina velirano amin’ny vahoaka »
Namaly an’ireo fanontanian’ny gazety l’express de madagascar manodidina ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ny mpitari-dalana nasionalin’ny antoko adn (antoka sy dinan’ny nosy) edgard razafindravahy. Manaraka akaiky ny fivoaran’ny toe-draharaham-pirenena ny tenany sady nampitandrina mba tsy hanadinoana ny tantara satria tsy manan-jo ny ho diso amin’ny safidiny intsony ny malagasy. L’Express de Madagascar : Tsy nankasitraka ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena mialoha ny firosoana amin’ny Fanorenana ifotony eto amin’ny firenena ianao, midika ve izany fa mitodi-damosina tanteraka amin’ny fifidianana ianao? Edgard Razafindravahy: Marina tokoa izany ary tsy miova ny hevitry ny antoko ADN fa tokony ho ny Fanore­nana ifotony no mandeha alohan’ny fifidianana rehetra. Manamarina an’ireo fanambaràna efa nataoko ny disadisa nahazo laka tamin’iny fifidianana fihodinana voalohany iny. Tsy tonga tamin’izany olana izany isika raha nomena andraikitra feno tamin’ny fandrafetana ny lisi-pifidianana ireo fokontany. Fa efa nanao ny safidiny anefa ny vahoaka tamin’ny fihodinana voalohany. Manaja ny safidim-bahoaka aho satria olom-pirenena tompon’andraikitra sady mpanao pôlitika sarotiny amin’ny ho avin’ny firenena. Ahoana ny fomba fijerinao ny ho fizotran’ny fihodinana faharoa? ER: Efa niasa mba hampandresy ny Fanorenana ifotony hatrany ny ADN ka hanohy hatramin’ny farany ny ady efa natombony. Tsy afaka ny hitazam-potsiny kosa anefa aho manoloana ny toe-draharaha ankehitriny sy izay mety mbola hiseho amin’izao fihodinana faharoa izao. Adidiko izany ary manana andraikitra aho hanoro hevitra an’ireo mpiray tanindrazana. Raha tiana ny hisoroka ny toe-draharaha tsy hahasoa mety hiseho aoriana ao, dieny izao dia mila mitandrina. Eo amin’ny kihon-dalana mavaivay isika, amin’izao vanim-potoana izao, ka raha tsy mandinika tsara dia hampidi-kizo tanteraka ny firenena. Hirona amin’iza izany ny safidinao amin’ireo kandidà roa ireo? ER: Aoka tsy hohadinoina ny tantara. Ny fitadidiana ny tantara no hahafahana tsy mamerina an’ireo hadisoana taloha sy hisafidianana lalana hafa. Tokony ho fantatry ny rehetra fa raha tonga amin’ izao toerana misy azy izao ny firenena, dia noho ny zava-nisy tamin’ny taona 2009 rehefa nametra-pialana ny Filoha Ravalomanana Marc vokatry ny fihetseham-bahoaka teto. Tsy tongatonga ho azy ny fahatezeran’ny vahoaka tamin’izany fotoana izany. Nahery vaika ny fana­raraotam-pahefana nampiha­rin’ny Filoha Ravalomanana tamin’ireo mpandraharaha, ireo mpanao pôlitika, ireo manamboninahitra, ireo mpanao gazety, ireo olom-piangonana sy fikambanam-pinoana samihafa hatramin’ny olom-pirenena tsotra, talohan’ny taona 2009. Hamerina ny tantara ratsy indray isika raha ho diso safidy amin’izao fihodinana faharoa izao. Mandeha ho azy izany ve ny safidinao any amin’i Andry Rajoelina? ER: Mazava angamba ny fitanisako ny santionan’ireo fahoriana nianjady tamin’ny sokajin’olona samihafa nan­dritra ny fitondrana jadona talohan’ny taona 2009 ireo. Matoky aho fa sahy hanova ny tantaran’ny fireneny ny Malagasy. Manaporofo an’izany ny safidim-bahoaka nahazoan’i Andry Rajoelina ny vato be indrindra tamin’ny fihodinana voalohany. Inona no antoka hanantenana fiovana tokoa ka mahatonga anao hiandany amin’ny kandidà Andry Rajoelina? ER: Masina loatra ny safidim-bahoaka. Tsy tokony hohadinoina mihitsy fa tetezamita feno tsindry sy fepetra tena nanahirana no noentin’i Andry Rajoelina tao anatin’ny dimy taona. Aorian’izao fiho­dinana faharoa izao izy vao tena hanana hirika hanaporofoany amin’ny vahoaka ny fahaiza-manao amin’ny fitantanana ny firenena. Tsy toy ny manao andra­nandrana ihany ve izany ho an’ny dimy taona manaraka? ER: Raha andranandrana, angamba, mety tsy ho sahin’i Andry Rajoelina ny hanao velirano imasom-bahoaka an’ireo fampanantenana 13 ao anatin’ny fandaharanasany. Ary heveriko fa hotsarain’ny tantara amin’izany izy. Tena ampy amin’ny tokony hifidianan’ny maro an’isa ny kandidà Andry Rajoelina ve izany? ER : Anisan’ny nanaitra ahy io velirano io satria tsy ataotao foana izany amintsika Malagasy. Ny fanaovana fifanekena amin’ny vahoaka dia mitaky fahasahiana sy fahavononana amin’ny fanatanterahana an’izay nampanantenaina. Hiandry inona indray moa isika mpifidy, raha misy kandidà roa eo ka ny iray no efa manao fianianana amintsika sahady? Ny tantara sy ny velirano ve no mason-tsivana nampirona anao amin’izao safidy amin’ny fihodinana faharoa izao ? ER: Ny tantara aloha dia efa mazava iny. Betsaka no lasibatra. Raha tena sahy kosa ny vahoaka dia mametraka ny fitokisany amin’ny mpanao pôlitika tanora izay mifanao velirano aminy. Efa zava-dehibe ny isian’ny teny ifanomezana dieny izao. Izaho Edgard Razafindravahy kosa no hijoro voalohany hanaraka akaiky ny fanatante­rahana an’ireo fampanantenana nanaovan’i Andry Rajoelina velirano amintsika vahoaka ireo. Tsy amin’ny kajikajy pôlitika mihitsy ny safidiko fa ny tombontsoa iombonana hatrany no tokony hibaiko ny fanaovana pôlitika. L’article EDGARD RAZAFINDRAVAHY :: «Fahasahiana ny fanaovan’i Andry Rajoelina velirano amin’ny vahoaka » est apparu en premier sur AoRaha.
Tatitry ny OMH: mihena hatrany ny varotra solika fandrehitra
Mbola mitana ny sain’ny maro ny vidin-tsolika nahena nanomboka ny 20 jona teo, taorian’ny fifampidinihana teo amin’ny filoha Rajoelina sy ireo mpandraharaha amin’ny solika. Ny vidin-tsolika fandrehitra no tena nihena, 500 Ar. Ny azo ambara, araka ny tatitry ny OMH.Ho fitsinjovana ny maro mampiasa solika fandrehitra, indrindra fa ny ambanivohitra. Izay ny antony lehibe naroson’ny fitondram-panjakana, niadiana varotra tamin’ireo mpandraharaha ka nahatonga ny vidiny ho 2 130 Ar ny litatra raha 2 630 Ar izany teo aloha. Nihena 500 Ar be izao, tombony lehibe izany ho an’ireo mpampiasa solika fandrehitra, ary milaza ny sasany fa tsy ny sitrapon’ny mponina an-tanàn-dehibe ihany no arahina. Efa nahena 100 Ar ny lasantsy ary 150 Ar ny gazoala.Raha iverenana ny momba ny solika fandrehitra, tokantrano maro, indrindra ny any ambanivohitra, ny mampiasa solika fandrehitra manazava amin’ny alina ; fa mampiasa izany akora izany koa ny orinasa sasany. Araka ny tatitra navoakan’ny OMH (Office malgache des hydrocarbures), ny taona 2013, nihena 36 % avy hatrany ny varotra solika fandrehitra raha ampitahana ny taona 2012. Tsy mitsahatra mihena intsony ny fanjifana azy io nanomboka teo hatramin’ny 2018, ary mitohy hatramin’izao.Antony lehibe nampihena betsaka izany fanjifana izany noho ny fahitana angovo azo havaozina any ambanivohitra. Raha 6 % ny nahazo herinaratra tany ambanivohitra, ny taona 2005, tafakatra 11 % izany izao, noho ny fiparitahan’ny angovo azo havaozina izay. Tanjona kendren’ny Ader (Agence de développement de l’électrification rurale) ny hampitombo izany hatrany. Maro ihany koa ny tantsaha mahatsapa ny fiantraikan’ny solika fandrehitra amin’ny fahasalamana, manimba ny taovam-pisefoana.Tena be mpampiasa ny gazoalaNy gazoala no tena be mpampiasa anisan’ny iankinan’ny fiainam-bahoaka sy ny fampandrosoana ny toekarena. Mampiasa io akora io, ohatra, ny fitaterana, ny orinasa, ny famokarana angovo, ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, ny asa vaventy. Ny taona 2018, gazoala 607 821 m3, raha 27 895 m3 monja ny solika fandrehitra tamin’iny taona iny ihany. Tsy any amin’ny solika fandrehitra mihitsy ny tombontsoan’ny maro anisa, na ireo toby fivarotan-tsolika aza, vitsy sisa ny mivarotra azy io. R.MathieuL’article Tatitry ny OMH: mihena hatrany ny varotra solika fandrehitra a été récupéré chez Newsmada.
GFEM: Manome tolotra manokana ho an’ny vehivavy mpandraharaha ny BOA
Mbola sakana ho an’ny fandraharahana eto amintsika ny fahasarotan’ny fitadiavana famatsiambola. Raha ny vehivavy mpandraharaha no resahana dia misedra olana izy ireo rehefa hindram-bola any banky. Nambaran’ny Filohan’ny GFEM, Razakaboana Fanja fa marobe ireo taratasy ilaina amin’ny findramambola eny amin’ny banky. Na dia voarafitra tsara aza ny mombamomba ny tetikasa dia tranga miverimberina, mahazo ireo vehivavy mpandraharaha mpikambana ao GFEM ny tsy fananana antoka ara-bola. Ho fanamorana ny fahazoan’ireo vehivavy mpandraharaha famatsiambola dia nohavaozina ny fiarahamiasa eo GFEM sy ny banky BOA. Mandritra ny roa taona ny faharetany fiarahamiasa eo amin’ny roa tonta ka anjara biriky ho ho entin’ny BOA amin’ny fanampiana ireo vehivavy manana tetikasa ny fampianarana azy ireo fomba fitantanam-bola ary ny tena lehibe indrindra dia fanomezana tolotra manokana ho azy ireo amin’ny findramambola. Hanentana azy ireo hanokatra kaonty any amin’ny banky ihany koa ny tomponandraikitr’ity fivondronan’ny vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara, araka ny fanazavan’ny Filohan’ny GFEM nandritra ny fifanaovantsoniam- piarahamiasa, ny 3 jona 2019 lasa teo. Marihina fa manomboka androany 11 jona 2019 ny fihaonamben’ny vehivavy mpandraharaha manerana an’i Madagasikara, karakarain’ny GFEM. Nirina R. Cet article GFEM: Manome tolotra manokana ho an’ny vehivavy mpandraharaha ny BOA est apparu en premier sur déliremadagascar.
Kandidà Serge Zafimahova, N°3, Antananarivo II: Ny isam-batan’olona no miresaka aminy
Nivalona ny herinandro voalohany amin’ny fampielezan-kevitra. Ny fihaonana sy ny dinika mivantana amin’ireo mponina, sy ny isam-batan’olona hatrany no tena iompanan’ny dian’ny kandidà Serge Zafimahova, any amin’ireo fokontany ao amin’ny boriboritanin’Antananarivo II. Ahoana marina moa ity 320 tapitrisa ariary ity ? Ahoana sy ho amin’ny inona no tokony ho fipetraky ny fampiasana azy ? Mitovy ny feo, niala tany Androndrakely, nandalo an’i Mahazoarivo sy Ambohidraserika, nipaka tany Ampasanimalo, na koa niainga teny Manjakamiadana sy Andohamandry ka hatrany Ankatso sy Ambolokandrina. Ireo no fanontanian’olona, nitondràn’ny kandidà valiny mazava, manoaloana ny manjavozavo nisy hatrizay. Ny fototra hiaingana dia ny fitsinjarampahefana tena izy, hisian’ny Sefompokontany sy Delegen’ny boriboritany voafidim-bahoaka, mahalala ny hetaheta any ifotony, ka ny Komitin’ireo Sefompokontany no hamaritra sy hitantana ny fampiasana ny 320 tapitrisa. Tonga nizara ny ahiahiny sy ny fanontaniana momba ny ho aviny ihany koa ny tanora, ary dia nanazava ny endrika vaovao hametrahana ny fanompoam-pirenena ny kandidà Serge Zafimahova : ho sokajiana roa, araka ny mari-pahaizan’ny tanora ; hisy ny fiofanana ara-miaramila, ary ho arahin’na fianarana asa ho an’ireo izay manohy antsitrapo, ka ny asa miteraka harena no hahazo tosika, toy ny fahazoana tany, fitaovana, na koa fampindamam-bola. Mahaliana ny mponina, indrindra moa fa ny renim-pianakavana, ny momba ilay tahirimbola ifampitsinjovana, hajoron’ny mpiara-monina. Fanohanana tsotra, miompana amin’ny sehatra fihariana, toy ny fambolena, fiompiana, varotra, zaitra, hotely gasy, sns. Ny mpikambana no mametraka ny fitsipika, hofanina ny mpitantana, ary samy handrotsaka vola amin’ny fotoana hifanomezana ny mpiara-miombona. Maro ny vehivavy mananontena sahirana rahefa misedra olana ara-pahasalamana na momba ny fianaran-janany, ka, amin’izay, dia ho azony atao ny mindram-bola ao amin’ny tahiry iombonana. Any an’elakelantrano, any amin’ny tontolo iainan’ny mponina mandava-taona, no mafana ny resaky ry zareo sy ny kanddà Serge Zafimahova : fandriampahalemana, varotra, fambolena, fianarana, ary koa ady amin’ny kolikoly, aretina mikiky ny fiaraha-monina, sy hisatra ho an’ny fampandrosoana. “Mila depiote hitanay tena miasa izahay, fa tsy rehefa fotoam-pifidianana vao tonga handambolambo anay”, hoy ny mponina. Nanangona: Nirina R. Cet article Kandidà Serge Zafimahova, N°3, Antananarivo II: Ny isam-batan’olona no miresaka aminy est apparu en premier sur déliremadagascar.
Karate-Avaradrano: efa miverina mikotrana avokoa ireo klioba
Tontosa soa aman-tsara teny Ampangabe Alasora, ny fivoriambe teo anivon’ny seksiona Avaradrano, taranja karate, izay notarihin’ny filohany, Sensei Ramanitra Andriamamonjy sy ireo mpikambana ao amin’ny birao mpitantana. Noresahina nandritra ny fivoriana ny mahakasika ny “statut” ho an’ny fe-potoana hitantanana sy ny fitsipika anatiny. Ankoatra izay, nambaran’ i Sensei Manitra fa tsy mbola misy aloha hatreto ny fitadiavam-bola azo atao. Toraka izany koa ny fifaninanana, izay mbola miato satria tsy maintsy miandry ny avy eo anivon’ny federasiona ny mahakasika ny tetiandron’ny fifaninanana. Na izany aza, efa eo an-dalam-panomanana ny Gassaku na fiofanana ny seksiona Avaradrano. Eo amin’ny fanazaran-tena kosa, efa saika miverina mikotrana avokoa ireo klioba.Araka ny hita teny an-toerana, klioba miisa 15 teo ho eo ny nahatonga solontena tamin’ity fivoriambe ity (Kokaju, kawam, kenkaju,Akka, Tfska, Rengkiu, Wado Gosetlai, Fudeshin, Ambohimanga Rova,…). Tonga nanome voninahitra ihany koa ny avy eo anivon’ny Minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena, nisoloan’ny delege an’Avaradrano , tena. Mi.RazL’article Karate-Avaradrano: efa miverina mikotrana avokoa ireo klioba a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – lalao firahalahiana: tsy maintsy manao fitiliana ireo mpilalaon’ny Barea
Efa eo am-panomanana ny lalao firahalahiana, hikatrohan’ny Barea de Madagascar sy ny Etalon-n’i Borkina Faso, ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny federasiona roa tonta, amin’izao fotoana izao. Tsy mantsy manaraka fepetra ny delegasiona roa tonta.Hatreto, tsy misy ny fiovana fa hotanterahina ny asabotsy 10 oktobra 2020 ny lalao fanomanantenan’ny Barea de Madagascar, hikatrohana amin’ny Etalons-n’i Borkina Faso. Nohamafisin’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF) fa tsy mbola misy ny fiovana fa any amin’ny kianja Lisbonne Portugal, no hanatanterahana io lalaon’ny roa tonta io. Efa eo anatin’ny fikarakarana ny antontan-taratasy rehetra ny tompon’andraikitra amin’izao fotoana izao.Anisan’ireny ny fandefasana ny taratasy fiantsoana ireo mpilalao handrafitra ny Barea de Madagascar sy ny fanomanana ny fampivondronana azy 23 mirahalahy, izay efa voalahatra fa atao any Frantsa, manomboka ny 5 oktobra, ho avy izao. Ankoatra izay, tsy maintsy manao fitiliana avokoa ireo mpilalao rehetra mialoha sy mandritra ary aorian’ny lalao. Tsy ny Barea de Madagascar irery no manao izany fa ry zareo Borkinabe, ihany koa.Ao anatin’ny fanajana ny hamehana ara-pahasalamana izany rehetra izany. Anisan’ireny ny tsy maintsy hanajana ny elanelana 1 m ao anatin’ny kianja sy ny fanaovana arovava ho an’ireo mpilalao fiandry, ny mpanazatra, ny dokotera ary ny fanasana tanana amin’ny fanafody voatokana amin’izany. Ankoatra izay, tsy azo jerena ny lalaon’ny roa tonta, amin’ity.Tafiditra ao anatin’ny fanomanana ny fihaonana hikatrohana amin’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, eo amin’ny fifanintsanana hiadian-toerana ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2022).Tsiahivina fa raha tsy misy ny fiovana, hatao any Abidjan, ny 9 novambra ho avy izao, ny lalao mandroso ary eto Madagasikara, any amin’ny kianja Barikadimy Toamasina, ny 17 novambra, ny fihaonana miverina. TompondakaL’article Kitra – lalao firahalahiana: tsy maintsy manao fitiliana ireo mpilalaon’ny Barea a été récupéré chez Newsmada.
Kianja Barikadimy Toamasina: misy mitady hanakorontana ny lalaon’ny Barea
Tsy mbola milamina ny ao amin’ny kianja Barikadimy, amin’izao iray volana mahery handraisana ny lalao miverina eo amin’ny Barea de Madagascar sy ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, izao. Niteraka gidragidra ny fanesorana ireo trano manamorona ny kianja.Nisavorovoro ny tao amin’ny kianja manara-penitra Barikadimy Toamasina I, ny alakamisy 17 sy ny zoma 18 septambra lasa teo. Anton’izany ny tsy maintsy nandravana ireo trano manamorona ny lalana miditra ao amin’ity fotodrafitrasa ara-panatanjahantena ho an’ny baolina kitra ity.Raha tsiahivina, anisan’ny fepetra takin’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa) ny tsy hisian’ny trano fonenana manakaiky ny kianja filalaovana. Tsy maintsy nirosoana izany hahazoana fankatoavana handraisana ny lalaon’ny Barea de Madagascar sy ny Elefantan’i Côte d’Ivoire. Efa hatramin’ny 10 febroary lasa teo no nandefa taratasy laharana 09-20/Cut/Toa, ho an’ireo mponina voakasika amin’izany ny kaominina an-drenivohitra Toamasina, handrava tsy misy hatakandro ny trano rehetra. Voalaza mantsy fa tsy ara-dalàna ny fananganana izany satria tsy nisy fahazoan-dalana.Atao lalana migodana misy soritra efatra ho an’ny fiara roa mandroso sy roa miverina mantsy izany, izay hita amin’ny ilany antsinanana sy atsimo ary andrefan’ny kianja Barikadimy, ankoatra ny toeram-piantsonan’ny fiara na “parking”. Manoloana izany, misy ireo mamadika azy ity ho resaka politika ka mitady ny hirika rehetra tsy hahavitan’ny fotodrafitrasa, mba tsy haneken’ny Fifa ny kianja Barikadimy ka tsy hahafahan’i Toamasina mampiantrano io lalao lehibe, efa andrasan’ny vahoakan’ny faritra Antsinanana fatratra io.Vokatr’izay, manao antso avo hiray hina ny mpitia baolina kitra eto Toamasina, satria antomotra ny fe-potoana hanaovan’ny solontenan’ny Fifa fitsirihana ny kianja Barikadimy, sao sanatria tsy hahazo fankatoavana ka ho votsotra ny fandraisana io fihaonan’ny Barea sy i Côte d’Ivoire, io. SajoL’article Kianja Barikadimy Toamasina: misy mitady hanakorontana ny lalaon’ny Barea a été récupéré chez Newsmada.
Fanatsarana ny fomba fandoavana faktiora. Nanavao ny fiarahamiasany indray ny Jirama sy ny Orange Money. Tontosa ny 18 septambra 2020 ny fifanaovan-tsoniam-piarahamiasa teo amin’ny Tale jeneralin’ny Jirama, Andriamanga Vonjy sy ny filohan’ny filankevim-pitantanan’ny Orange Money, Degland Michel. Entina hanampiana ireo “antokon-draharaha ara-barotra” sy ireo toerana fandoavam-bola an’ny Jirama ity fiarahamiasa vaovao ity mba hanamorana ny fiainana andavanandron’ny mpanjifa ao amin’ny Jirama. Nanomboka tamin’ny taona 2014 dia nanampy ireo mpanjifa tamin’ny fomba tsotra sy haingana ary tsy andoavam-bola sy tsy mila mivezivezy ny fandoavana ny faktiora tamin’ny alalan’ny Orange Money. Fomba iray ialana amin’ny filaharana elabe ity tolotra ity. Raha toa ka tsy manana kaonty amin’ny Orange Money ireo mpanjifa dia azo atao ny manefa izany eny amin’ny “Cash Point Orange Money”. Ankoatr’izany, azo atao amin’ny alalan’ny Orange Money na eny amin’ny botika Orange ny fividianana fahana ho an’ireo manana kaontera “prépayé”. Vokatr’ity fiarahamiasa ity, afaka manaramaso ny faktiora nandoavam-bola ireo mpanjifa ary mamoaka izany amin’ny taratasy rehefa avy mitsidika ny tranokalan’ny Orange Money Madagascar. Nirina R. Cet article JIRAMA SY NY ORANGE MONEY: Manamora ny fiainana andavanandron’ny mpanjifa est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article JIRAMA SY NY ORANGE MONEY: Manamora ny fiainana andavanandron’ny mpanjifa a été récupéré chez Délire Madagascar.
Famakiana bantsilana ny raharaham-pirenena: mivonona ny hanenjana ireo vondron’ny mpanohitra
Fanambarana faharoa. “Nisy fahadisoana ny voka-pifidianana noho ny “doublons”. Tsy ahitana taratra ny fahaleovantenan’ny Ceni izany… Ho avy ny fotoana hamakiana bantsilana sy hampahafantarana ampahibemaso ny vahoaka ny tsy mety ataon’izao fitondrana izao”, hoy ny ampahan’ny fanambaran’ireo vondron’ny olom-boafidy, ahitana ben’ny Tanàna sy mpanolotsaina ary ny maro hafa, teny Andrainarivo, omaly. Anisan’izany ny fanararaotam-pahefana sy ny fanitsakitsahana ny demokrasia. Nohitsin’izy ireo fa tsy hijanona intsony ny hetsika ataon’izy ireo raha tsy tanteraka ny hetahetan’ny Malagasy. Nentanin’izy ireo koa ireo olom-boafidy hafa tokony ho mpifidy ireo loholona mba hanara-dia azy ireo amin’ny tsy handraisany anjara amin’ny fifidianana. Anisan’ny iantefan’izany ireo voafidy amin’ny antoko politika sy ny tsy miankina.Synèse R. L’article Famakiana bantsilana ny raharaham-pirenena: mivonona ny hanenjana ireo vondron’ny mpanohitra a été récupéré chez Newsmada.